Wolves oo cashar lama ilaa waan ah u dhigatay Kooxda Manchester United +Sawiro – Gool FM
( Premier League ) 2 Abriil 2019 Kooxda Manchester United ayaa guul daro xanuun badan kala kulantay Kooxda Wolves kulan ciyareed ku soo dhamaaday 2-1 oo ay guushu ku raacday Kooxda Wolves .
Kulan ciyareedka qeebtiisa koowaad oo ahaa mid aad u xiiso badan waxa uu ku soo idlaaday bar-baro 1-1 , ciyartoyda labada dhinac ayaana soo bandhigay ciyaar aad loo jecleesto .
Kooxda Manchester United oo marti aheyd ayaa la hor martay goolka waxaana u dhalieyey Scott McTominay daqiiqadii 13-aad ee ciyaarta kaddib caawin uu ka helay laacibka rere Barazil ee Fred .
Wolves oo sina aan isku dhiibin ayaa soo rogaal celisay iyaga oona la yimid goolkii bareejada ee ciyaarta daqiiqadii 25-aad ee ciyaarta waxaana u dhaliyey goolkaas Diogo Jota kaddib caawin qurux badan oo uu ka helay Raul Jimenez.
Lakaku oo weerarka kaga ciyaara Manchester ayaa sameyey lab isku day oo gool loo filan karay balse nasiib daro midna gool ma noqon , ciyaarta ayaana ku soo dhamaatay bar-baro 1-1 .
Nasiino kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambe ee ciyaartya oo aheyd mid aad u xiiso badan wallow United cadaadis badan uu saarnaa madaama Wolves aya tahay koox kubada la qeebsaneysay .
Daqiiqadii 57-aad ee ciyaarta Kabtanka Kooxda Manchester United ee Ashley Young ayaa laga saaray ciyaata kaddib markii uu qaatay kaarkii labaad oo jaale ah .
Wolves ayaa weerar cir iyo dhul ku qaaday shabaqa kooxda United madaama ay ku ciyaarayeen 10-xidig oo qura , United ayaa ciyaarta ku soo biirisay daafac kale waxaana garoonka soo galay Phil Jones xili ciyaarta laga saaray Fred .
Casaankii uu bixiyey garsoore Mike Dean waxa uu ka dhignaa in uu bixiyey casaankii 100-aad xirfadiisa garsoornimo , United waxaa soo food saaray cadaadis aad u daran iyaga oona iska dhaliyey gool kam ah daqiiqadii 77-aad ee ciyaarta waxaana goolkaas iska dhalieyey Chris Smalling.
Ugu dambeen ciayaarta ayaa ku soo dhamaatay 2-1 oo ay guushu ku raacday Kooxda Wolves oo labo guul oo xiriix ah ka gaartay kooxda Manchster muddo dheer kaddib .
HORDHAC :Man City VS Cardiff City ? kaga bogo macluumaadka kulankan oo dhameestiran iyo xiliga la daawan doono